samedi, 25 mai 2019 13:13
Fetison Rakoto Andrianirina: « Ilaina ny fisian'ny Mpanohitra »
Naneho hevitra ao amin’ny pejy fesibokiny ny Filohan’ny antoko RDS (Roso ho amin'ny Demokrasia Sosialy) amin’izao andro famaranana ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao, milaza fa "Ho an'ny tany demokratika dia ilaina ny fisian'ny Mpanohitra afaka hanao fanankianana sy fanaraha-maso ny asan'ny Filoham-pirenena sy ny Governemanta". Handroso i Madagasikara, hoy i Fetison Rakoto Andrianirina raha samy manana ny fitondram-piaina (etika) mendrika ny Mpitondra sy ny Mpanohitra.
samedi, 25 mai 2019 12:27
Faradoboka Rastany Ampamatanana: Niara-nientana ny rehetra nanangana ny podium vaovao
Raha teny Ambohipo, Boriborintany faha II no nahazoana alalana avy amin'ny distrika, dia noraran'ny filoham-pokontany vao notendrena omaly ny hetsika faradoboky Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25, mitondra ny laharana faha 9 amin'ny bileta tokana. Tsy nitady sotasota anefa i Rastany sy ny ekipany, na dia teo daholo aza no nanao fampielezan-kevitra ireo mpifaninana taminy, fa dia nafindra ety Ampamatanana eo amin'ny kianja fanaovam-baolina ny faradoboka. Niara-nientana ny rehetra nanangana ny podium, ka nasehon'izy ireo fa manana olona hiatrika ny fampandrosoana ny Boriborintany faha II, anatin'ny filaminana ny Tiako i Madagasikara miaraka amin'i Filohany Marc Ravalomanana. (Jereo Sary Tohiny)
Fifidianana depiote: Hifarana anio misasakalina ny fampielezan-kevitra
Ora sisa isaina dia hikatona tanteraka ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka. Anio sabotsy 25 mey 2019 misasakalina no fetra farany omen'ny lalàna hanaovana propagandy. Aorian’ny misasakalina mandrampikaton’ny birao fandatsaham-bato ny 27 mey 2019 dia mitsahatra avokoa ny hetsika rehetra miendrika fampielezan-kevitra : ny famoriam-bahoaka, ny fametahana petadrindrina, ny famoahana amin'ny tambazotra sy teknolojia samihafa manentana ny olona hifidy kandida, ny antso na SMS, ny fampiasana fitaovana samihafa toy ny "banderoles", "t-shirts", sns.
samedi, 25 mai 2019 08:42
Mahajanga : Karohina fatratra i Andriatsimilao Ando Firaisantsoa
Namoaka filazana fikarohana an’ity ramatoa ity, izay vadin’ny kandida depiote ao Soalala ny Zandary manao fikarohana heloka bevava Mahajanga taorian’ny didy fampisamborana navoakan’ny Fitsarana. Fisolokiana sy fandefasana seky tsy misy antobola mitentina 200 tapitrisa Ariary nividianany entana teto Mahajanga no anenjehana azy.
samedi, 25 mai 2019 08:39
Fifidianana Depiote: Nandefa mpanaramaso miisa 37 ny SADC
Hiparitaka amina Distrika 10 anaty Faritra 7, izay misy ny 60% ny mpifidy ireto mpanaramaso ny fifidianana miisa 37 mianadahy nalefan'ny SADC ireo.
Natolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha ny Alakamisy 23 mey 2019 tolak'andro ilay miaramila amperin'asa avy ao amin'ny Toby miaramila 711 Amborinala – Sambava, sy ny vadiny, izay voarohirohy ho nandray anjara tamin'ny fanafihana mitam-basy ka nitifirana namonoana ilay mpikirakira lavanila monina tao Tsararivotra Fokontany Ambodisatrana-II ny alin’ny 28 Aprily 2019. Nananosarotra ihany ny fanolorana ity miaramila ity teo ampelan-tananan'ny Zandarimaria mpanao famotorana noho ny tsy naneken’ny lehibeny ny hanolorana azy avy hatrany tamin'izy ireo, koa tamin’ny Alarobia farany teo, izay vao afaka niroso tamin’ny famotorana, ka izao natolotra ny Fitsarana, ary nidoboka am-ponja vonjimaika izao izy sy ny vadiny. Marihina fa vola teo amin ny 17 400 000 Ariary no voaroba tamin'izany, ka olona miisa dimy no efa nampidirina am-ponja vonjimaika mikasika ity raharaha ity, niampy ity miaramila mivady.
Nidina teny Behoririka nanao fisavana sy fanagiazana tao amin'ny trano fonenan'ny teratany Sinoa iray, androany, ny Ministeran'ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana, notarihan'ny Talen'ny kabinetra niaraka tamin'ny kaomiseran'ny varotra, ny mpanara-maso ny vokatra, ny vaditany ary mpitandro filaminana taorian’ny loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo. Nahatratrarana vokatra simika "Aspartame" milanja roa taonina eo ho eo tao an-toerana, izay tsy nahazoana alalana satria tsy manana taratasy fanomezan-dalana hanafatra sy hivarotra na hanodina ity vokatra ity ireto teratany Sinoa ireto.
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny faritany Ambohidahy ny permis biométrique vaovao iraisam-pirenena. Ho an’ireo tsy mbola manana nefa efa nahazo quittance teo aloha no mandeha aloha, miaraka amin'ireo mbola tsy manana, izay hisokatra amin'ny herinandro ambony io. Ho an'ireo izay hanolo ilay permis tsy nety teo kosa dia amin'ny 20 janoary 2020 vao manomboka soloina. Mila mampidi-bola aloha ny fanjakana amitana ny hafa.
vendredi, 24 mai 2019 08:15
Amboasary Atsimo: Lasa politika ny fivarotana « vary mora »
Ao amin’ny tranon’ny zandrin’i Soja Jean André na Kaleta, izay kandidan’ny « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » no mitoby sy izarana ny « vary mora » eto Amboasary Atsimo. Sarotra ho an’ireo tsy manohana an’ity kandida ity ny mahazo vary, eny hatramin’ny sefo Fokontany aza voalaza fa tsy manao sonia ny karinen’izy ireo.
Page 13 sur 436